80 ဘတ်စ်ကားအသစ် Denizli Metropolitan မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်သို့ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ20 Denizli80 ထံမှ Denizli မြို့တော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသစ်ဘတ်စ်ကားရေယာဉ်စု
80 ထံမှ Denizli မြို့တော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသစ်ဘတ်စ်ကားရေယာဉ်စု
29 / 10 / 2018 20 Denizli, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, PHOTOS, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
အဆိုပါမြို့တော် 80 ထံမှအသစ်သောဘတ်စ်ကားယာဉ်မှ Denizli သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
အသစ်ကဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှု 80 မှာဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနားကိုနှင့်အတူဥရောပအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်၏ကြမ်းပြင် entry ကိုအနိုင်ရကြောင်း Denizli မြူနီစီပယ်ဘတ်စ်ကားစစ်ဆင်ရေး Facility ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန်, အရာအားလုံးပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးဖြစ်လိမ့်မည်ကျနော်တို့ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးမှတ်သောဤလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုရာ၌ခန့်ထားပြီ "ဟုအဆိုပါမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Osman လျက်ဇိုလာ၏ဆင်တူဟုပြောသည်" ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးဆု, ဒါပေမယ့်ဥရောပကနေဘတ်စ်ကားယူရန်အလွန်ရှင်းလင်းစွာကျွန်တော်ပြီးမြောက်နိုင်ပါတယ်အရာကိုပြပါ "ဟုသူကဆိုသည်။
သူ 80 ၏ဖွင့်ပွဲဝင်ရန် Denizli မြူနီစီပယ်ဘတ်စ်ကားစစ်ဆင်ရေး Facility ၏ Denizli မြူနီစီပယ်၏ကာလပြီးစီးခင်မှာအသစ်ကဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုကြောင့်အခမ်းအနားနှင့်အတူမြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရေယာဉ်စုမှထပ်ပြောသည်။ ဥပစာတွင်ကျင်းပခဲ့သည် Denizli မြူနီစီပယ်ဘတ်စ်ကားစစ်ဆင်ရေးအခမ်းအနား, Denizli အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Hasan Karahan, AK ပါတီလက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ Cahit Ozkan, Denizli လက်ထောက် Hawk ရဟတ်ယာဉ် T နှင့် Nilgun Oke, Denizli မြို့တော်ဝန် Osman Zolan, BMC ဥက္ကဋ္ဌ Ethem Sancak, BMC ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင် Yasin Ozturk, အများအပြားနိုင်ငံသားများဖိတ်ကြားနှင့်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ Denizli အတွက်5လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအဖွင့်မိန့်ခွန်းမှာ Denizli မြို့တော်ဝန် Osman လျက်ဇိုလာ, ရှိသမျှရှုထောင့်တစ်ခုဥပမာသည်မြို့ပြမွို့၌ status ကိုရရှိခဲ့သူကဆိုသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Osman လျက်ဇိုလာ, "အဖြစ်အားလုံးမြို့ကြီးများတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်စပ် Denizlimiz လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ခဲ့ရသည်။ ကျနော်တို့မနှစ်ကဘတ်ဂျက်မှအနီးကပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး370 ရာခိုင်နှုန်းကိုအစီရင်ခံအဖြစ်။ သင်စစ်တမ်းများဖန်ဆင်းသောကြောင့်, လေ့လာမှုများသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်စပ်အခက်အခဲရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာကျနော်တို့တာဝန်များကိုဖြေရှင်းနိုင်ကောင်းစွာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အသွားအလာများစီးဆင်းမှုအရှိန်အဟုန်မြှင့်အဖြစ်ကျနော်တို့အများကြီးမြို့ပြ Interchange ပွုပါပွီ။ ကျနော်တို့ကိုအလွန်ပိတ်ဆို့မှုကိုကုန်ကျစရိတ်, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Denizli, ယနေ့အရေအတွက်ကသမ္မတဦးသိန်းစိန် Osman လျက်ဇိုလာကိုမီးမောင်းထိုးပြ 2004 တထောင်ယာဉ်များရောက်ရှိထားပြီးသော 134 404 တထောင်မော်တော်ယာဉ်များအတွက်, said: "တစ်ခါတလေအတူတူလမ်းများ၏နံပါတ်, ဒါပေမယ့်လမ်းများတိုးမြှင့်3Tools များ။ Interchange အစီအစဉ်များ, Interchange, ဒေသခံနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်စီမံကိန်းများ, အသွားအလာအသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေ minimize ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွင်နေထိုင်ခဲ့ရသည်။ ဒီနေ့တောင်မှပိုအဆင်ပြေဖြစ်ကြသည်။ နယူး Avenues အသစ်တစ်ခုလက်စွပ်လမ်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းအားဖြင့် Denizlimiz သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသက်သာရာဖို့ဘယ်လိုပေါ်မှာငါတို့အားထုတ်မှုကိုဆက်လက်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့အကွာအဝေးအသွားအလာအရသိကြအထူး tools များလိုအပ်တာတွေရပ်စဲပါလျှင် "ဟုအဆိုပါယာဉ်ကြောပြဿနာအရေးကြီးဆုံးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမှာအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတ Osman လျက်ဇိုလာသည်ဟုဖော်ပြထား" ။ ဒီတော့ဝေး, ငါတို့ 150 ဘတ်စ်ကားဝတ်ပြုကြလော့။ နိုင်ငံသားများဘတ်စ်ကားများ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ပင်သစ်ကိုလိုင်းများဘို့ငါတို့တောင်းဆိုမှုများဆီသို့ရောက် လာ. , သို့မဟုတ်။ ကျနော်တို့ကယနေ့ဒီဝယ်လိုအားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ 80 tool ကိုထွက် yumup ရှောက်သွားဘူး "ဟု၎င်းကပြောသည်။
ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်သမ္မတ Osman လျက်ဇိုလာဒီမှာ Ethem Sancak Bey ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်ဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သော, "၏ reminiscent" အရာအားလုံးကဒေသခံများနှင့်အမျိုးသားရေးဖြစ်လိမ့်မည် "။ ကျနော်တို့ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးမှတ်သောဤလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေးခယျြမှုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘတ်စ်ကားယူဥရောပကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းအမျိုးသားရေးဆုပေမယ့်အလွန်ရှင်းလင်းစွာကျွန်တော်ပြီးမြောက်နိုင်ပါတယ်အရာကိုထုတ်ဖော်ပြသ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ အဆိုပါရိက္ခာစျေးပေမယ့်လိုအပ်ချက်များကိုအပြည့်အဝ "အစအဦးမှဆင်းသက်တမ်းတိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘတ်စ်ကားများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဒီဧရိယာကသမ္မတ Osman လျက်ဇိုလာနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကြောင်းမှတ်ချက်ချကြောင်းယခင်ကကျနော်တို့ပြုပြင်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်စက်ရုံတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ၏ Denizli မြူနီစီပယ်ဘတ်စ်ကားစစ်ဆင်ရေး Facility ဤတွင်ကျွန်တော်တစ်ဦးစက်ရုံလည်းဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်ယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်သောကိရိယာများ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကစက်ရုံ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနိုင်ငံသားများသမ္မတဦးသိန်းစိန် Osman လျက်ဇိုလာ, "Denizli အတွက်စမတ်အသွားအလာရွေးချယ်ဖို့သူတို့ကိုတောငျးဆို။ သင့်ရဲ့ဖုန်းကို 'ငါ့ဘတ်စ်ကား?' ဘယ်မှာလဲ ဟုမေးသောအခါ, သင်ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘတ်စ်ကားတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကိုင်ရက်နေ့တွင်နောက်ဆုံးရပ်နား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတ Denizlimiz နေ့ညဉ့်မပြတ်ပေးပြီန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအပ်နှင်းယူပြီး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်ကဘတ်စ်ကားများနှင့် Denizlimiz ကံကောင်း get ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောက်အဦမှအကျိုးရှိ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
"တကယ်တော့ငါ Denizliliy Siirtliy ပေါ့ဒါပေမယ့်လည်းအချိန်တွေအများကြီး: BMC ဥက္ကဋ္ဌ Ethem Sancak" Denizli ငါ၏အနိုင်ငံသား "ဟုသူကသူ၏မိန့်ခွန်းကိုဆက်လက်စတင်ခဲ့သည်။ Denizli ဝန်ဆောင်မှုငါ့အဘို့ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အတူစတင်ခဲ့ပါဘူး။ အများကြီးဝင်ငွေငါ၏အဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကိုသွားလိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။ Acıpayamခရိုင်Acıpayam Sanchez အတွက် AtaSancak ကမ္ဘာကြီးကိုအမှတ်တံဆိပ်လယ်ယာလုပ်သူတို့အပြောထားပါသည်, "စိုက်ပျိုးရေးဒါ Denizli အတွက်အခြားအမှတ်တံဆိပ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး3လယ်ယာတဦးဖြစ်ခဲ့သည် "ဟု၎င်းကပြောသည်။ Sandzak အတွက်ဖြစ်ဖို့အကြီးအပျြောအပါးထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သူ Denizli, "ငါတို့မာနထောင်လွှားများအတွက် BMC ဘတ်စ်ကားကျွန်တော်တို့ရဲ့မာနထောင်လွှား။ အဆိုပါ 100 ရာခိုင်နှုန်းကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်, ဘရပ်ဆဲလ်တွင်ကျင်းပသည့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဘတ်စ်ကားတရားမျှတတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူရကီအင်ဂျင်နီယာများအလုပ်အတူကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဒီဘတ်စ်ကားအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနည်းပြ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ BMC လည်း "အဖွဲ့အစည်း Sanchez ၏သောဇာတ်လမ်းတပုဒ်ကိုပြောပြဒေသခံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသားကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းတဦးဖြစ်တယ်, သူကပြောသည်။ မစ္စတာကသမ္မတကျနော်တို့ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများအပြောင်းကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုသို့ပြောသည်။ ဒါကကုမ္ပဏီယနေ့ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း 70 အတွက်ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်တယ်။ ကြည်းတပ်ကျောင်းသားထုတ်ကုန်။ Hedgehog ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းယင်း၏နောက်လာမည့် 13 တိုင်းပြည်တင်ပို့နေကြသည်, ထိုကြည်းတပ်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားနေပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းညာဘက်, သူ၏မိန့်ခွန်းကိုဆက်လက်: "Denizli ကမ္ဘာအမှတ်တံဆိပ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, မြို့အုပ်ချုပ်ရေး Denizli အတွက်ရှေ့ဆက်သွားနေပါတယ်။ သူကမစ္စတာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြောကြားခဲ့သည်။ စမတ်စီးတီးအယူအဆ Denizli အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘတ်စ်ကားသည်လည်းငါတို့စမတ်မြို့စီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ဦးသင့်လျော်သောနည်းပညာကိုတပ်ဆင်ထားကြသည်။ ကျနော်တို့လူမျိုး၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့် BMC အဖြစ် Aegean Denizli အတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့လူမြိုး၏ဝန်ဆောင်မှုမှာဖြစ်လိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
Denizli လက်ထောက် Cahit Ozkan စဉ် AK ပါတီအုပ်စုတစုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, တူရကီဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်အများအပြားအသစ်သောတီထွင်မှု၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်တွင်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကိုတူရကီတစ်ဦးထွန်းလင်းကြယ်ပွင့်ဖြစ်လာသည်နှင့်တူ Ozkan, "ဒါဟာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤတွင်တူရကီအမြဲထွန်းကား, ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကနေ Denizlimiz ကိုလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်သာယာဝပြော၎င်း၏ဝေစုကိုလက်ခံရရှိကြောင်းkalkınırkခံယူနေဆဲဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီး Nihat Zeybekci အလွန်ခက်ခဲခွအေနမြေားအောတီထွင်မှု Denizlimiz ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဝန်ဆောင်မှု၏ခေါင်းဆောင်မှုသည်စည်ပင်သာယာသမ္မတ Osman လျက်ဇိုလာအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းနှင့်အတူအချိန်အတွက်ယနေ့ကြည်လင်ရွှေအသက်အရွယ်ရောက်ရှိလာသည်။ ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူနေဘယ်လောက်လျော့နည်း, ချီးမွမ်းခြင်း "ဟု၎င်းကပြောသည်။ သူ၏မိန့်ခွန်းထဲမှာ Denizli အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Hasan Karahan, Denizli ဥရောပနှင့်တူရကီအတွက်အများဆုံး livable မြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းကဆိုသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Knight ဟာ, "လိုမြို့ကြီးပြအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အရေးကြီးဆုံးပြဿနာကြောင့်လည်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှမည်မျှပင်ဖြစ်ပါတယ်။ Denizli လည်းဤပြဿနာကိုမှအများဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအသစ်ကဝန်ဆောင်မှုဘတ်စ်ကားများကခေါ်ဆောင်သွားဖို့နှစ်ဦးစလုံးဟာအဓိကအောင်မြင်မှုများကဒီစက်ရုံကိုဖန်ဆင်း, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ အဆိုပါမိန့်ခွန်းပြီးနောက်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက် Denizli မြူနီစီပယ်ဘတ်စ်ကားစစ်ဆင်ရေးအသစ်ကဘတ်စ်ကားစက်ရုံ 80 ဆုတောင်းပဌနာ၏အဖွင့်နှင့်အတူဝန်ဆောင်မှုဝင်ကြ၏။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Osman လျက်ဇိုလာနှင့်သူ၏ဘတ်စ်ကားနောက်ပိုင်းတွင်လေ့လာခဲ့ကြသည်။
တူရကီအင်ဂျင်နီယာများ၏တရာရာခိုင်နှုန်းက BMC Neocity, အရှည် 8,5 မီတာ 70 လူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ၎င်း၏အတန်းထဲတွင်အမြင့်ဆုံးခရီးသည်စွမ်းရည်နှင့်အတူပြုလေ၏အဖြစ်မသန်စွမ်းလူများအတွက်လက်လှမ်းတိုးမြှင့်စွမ်းရည်ဘတ်စ်ကားများကိုအဘယ်သူသည်အလုပ်ချိန်နာရီ 5.600 လူတွေ။ ပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေဒီဇယ်ထုတ်လွှတ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူယူရို6210 HB အင်ဂျင်မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လိုက်နာမှုအဆိုပါ BMC ဥရောပအကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းကိုဆုချီးမြှင့်ထားပြီး Neocity'n ။ ခရီးသည်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်စနစ်များ extinguishing အလိုအလျောက်မီးအားဖွင့်ကင်မရာနှင့်အသံဖမ်းစနစ်ကဘတ်စ်ကားချီတက်ခဲ့သည်။ လည်းပါဝင်သည်ဘတ်စ်ကားအော်တိုဂီယာအတွက်စီးနင်းအရည်အသွေးကိုအတွင်းစိတ်-မြို့, high-performance ကိုလေအေးပေးစက်စနစ်ကပိုကောင်းစေပါတယ်တည်ရှိသည်။
Sakarya ပို့ဆောင်ရေးရေယာဉ်စု 24 သစ်ဘတ်စ်ကားပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
သစ်ဘတ်စ်ကား Sakarya ပို့ဆောင်ရေးရေယာဉ်စု 21
Transit ဘတ်စ်ကားရေယာဉ်စုမှ Adana နယူး 60 ထည့်သွင်းခြင်း
Denizli တဲ့ Metropolitan ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းကနေအနှစ်တရာ
အဆိုပါမြို့တော် Denizli ကနေအတားအဆီး-အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
Mercedes-Benz Ulusoy ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးထရပ်ကားစင်းကို 105
အဆိုပါ Antalya တဲ့ Metropolitan 200 ကနေမြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘတ်စ်ကား
၁၈ Alanya Metropolitan မှ Alanya သို့ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်အသစ်များ
အဆိုပါမြို့တော် Manisa Turgutlu ဖျေါပွခကျြကနေ Culvert